Ngaphandle kokushokoxwa, iikhamera zoMzimba waMapolisa zisaziwa | Izisombululo ze-OMG
Ngaphandle kokushokoxwa, iikhamera zoMzimba waMapolisa zisaziwa ngoku
Iikhamera ezinxibe umzimba zinokuwa kwazo, ayisiyonto yonke kwaye igqibeleleyo. Esi siqwenga sakhiwo sineengxaki ezithile ezijamelana nazo kunye nemicimbi ethi ivele ngakumbi xa isetyenziswe gwenxa okanye isetyenziswa kwiimeko ezingalunganga. Siza kudweliswa ezimbalwa kwezi kwaye sizigwebe ngokugxekayo ukuba, ngaphandle kwezizathu zayo, oku kuwa kungagxothwa? Kwaye oku kuza naliphi igalelo kule mida?
Imicimbi yemali kunye nokuGcina
Nanini na xa sifuna ukubhekisa kwinto engalunganga yokuqhuba le nkqubo, iingxaki ezimbini ezinesibindi ziza engqondweni yimali nendawo. Ihlala ikhona ingxaki yokuba kufuneka igcinwe phi le vidiyo, nokuba yeyokufuna ukuqeqesha iiarhente zokhuseleko malunga nendlela yokwenza oku kuvela kwakhona. Unokuthenga ikhamera kangangezigidi zeedola, lo mcimbi awuyongxaki kodwa ugcina ngoovimba, ukuhlela, kunye nolungiselelo olufanelekileyo ukuze ukwazi ukufikelela ngokulula kwividiyo xa ifuneka. Oku iba yingxaki enkulu kwiimeko ezininzi. Nangona amapolisa esithi ayakwazi ukugcina imali eninzi ebinokuchithwa ngenye indlela kwityala lolwaphulo-mthetho, ukugcina ezi vidiyo zininzi ziba yingxaki enkulu.
Kwinqanaba langoku apho ikhamera yomzimba yenziwe khona, ikhamera ayisiyi-tracker yamehlo njengoko sibona kwi-FSI. I-FSI sisiqwenga setekhnoloji enokulandela apho iliso lijonge kwaye isebenzise ukuqaqanjelwa ukujolisa kwithagethi ekujolise kuyo. Ingatshintsha intshukumo ngamehlo kwi microseconds. Ikhamera yomzimba yakhiwe ngendlela yokuba; Unokujonga kwindawo ethile kwaye ungabambisi isenzo esiqhubekayo kuloo ndawo, yinto yonke ukuba ungabinakho ukubona isenzo esenzeka phambi kwakho kwikhamera.
Xa uthelekisa ikhamera ngokuthe kratya ngamehlo, akunakwenzeka ukuba ikhamera ikwazi ukuqaphela nokwenza izinto ngokuhambelana nomzimba okanye imeko yengqondo enokubakho umntu onxibayo. Oku kwenza ukuba kungabikho uhlengahlengiso kwimeko ethile. Iliso linokucoca imifanekiso engasafunekiyo yokusinda okanye yenzeke ngeenxa zonke ukuba umntu ufuna ukuphuma ngokukhawuleza kwimeko ethile. Ngelixa uthelekisa iliso lomntu kunye nekhamera enxibe umzimba uwela kakhulu ngasemva, xa ungaphantsi kwesoyikiso, ingqondo yakho iya kubonisa isoyikiso ukuba isondele kwaye ikufutshane kukushukumisa kwaye ikwenze ukuba utshintshe indawo ukusuka kwindawo ethile. Le nto yaziwa ngokuba "kukuza" lo ngumda othile wekhamera enxibe umzimba, ithatha nje ngaphandle kokulungiswa kunye nokukwazi ukunxibelelana nento eyenzekayo. Ezi zizinto ezinokumenza umntu ahlaziye i-footage kamva, amava obunzima ngokunxulumene nesigameko esithile esinokuthi senzekile. Oku, nangona kunjalo, iba kukubuyela umva kwekhamera enxibe umzimba.
Iimeko ezibalulekileyo ezinobungozi azirekhodwa
Kukho iintshukumo ezibalulekileyo, ezibizwa ngokuba "zii-tactile cue" ezingenakubanjwa kwikhamera. Masicinge ukuba igosa laliza kubamba umrhanelwa, kodwa umrhanelwa uzama ukuxhathisa izihlunu zakhe. Le yinto engenakubanjwa kwikhamera kodwa xa imeko enje yenzeka. Igosa lidla ngokunyanzelwa ukuba lisebenzise amandla ongezelelweyo ukubamba. Xa iividiyo ezinje ngezi zijongwa kamva, ihlala ibonwa ngokungathi igosa lisebenzise amandla angafanelekanga ukuphatha umrhanelwa. Oku kuyalahlekisa kakhulu njengoko sisiba sisilela kwikhamera enxibe umzimba, oku kungadala iingxaki ezinkulu kuphando.
Enye ingxaki enokuthi iqondwe kukuba; iinkumbulo azibonisi kwiikhamera. Amagosa enzelwe ukuba namava okujongana namatyala, ummi angabona imeko engenayo ngelixa igosa lingabona kwaye libone ingozi ethile kwaye lisebenze. Ezi nkumbulo okanye amava awabonisi kwikhamera, inokuziva ngokungathi igosa lenze isenzo ngaphandle kwesizathu. Sinokuzama ukucinga ngemeko apho umrhanelwa ephakamisa izandla zakhe ngendlela ethile, umntu onelungelo lokuhlala nje angaziva ngathi kukuhamba nje okuqhelekileyo okanye sisenzo sokunikezela, kodwa njengegosa lomthetho elinamava amaninzi kunye uqeqesho. Ukhumbula ngokukhawuleza iimeko zangaphambili okanye ukhumbule uqeqesho olwenziweyo kwaye wenze ngokuhambelana.
Isantya sokurekhoda iirekhodi ezinxibeweyo zekhamera, sahluke kakhulu kwaye sikhawuleze kakhulu kunekhamera yeCCTV kwivenkile okanye kwindawo ethile. Ngenxa yesantya serekhodi, ezinye izehlo zinokwenzeka ngokukhawuleza kunoko zinokuphulukana phakathi kwezakhelo. Imicimbi efana nale inokwenza ukukhanya kwesitshe okanye inkcenkce, enokubaluleka kakhulu kwimeko yophando inokuphulukana nesantya serekhodi. Enye into ephosakeleyo lixesha lesenzo kunye nokusabela komzimba. Ke ukuba igosa liyadubula okanye lithintela ukudubula, isenzo kunye nokuphendula kunokubonwa kwaye kutolikwe ngokungalunganga ngenxa yoko kubangela iingxaki.
Ukwazi kwekhamera ukubona ngcono kwiindawo eziphantsi zokukhanya
Kukho amaxesha emva kokuba kudlalwe i-video erekhodiweyo, indawo yokukhanya ephantsi ibonakala kakhulu kwabo bajongileyo, abanako ukukuqonda okanye ukubona into umntu ongayiboniyo kwimeko yokubonwayo engaboniyo. Igosa lingaphantsi kumhubhe elizama ukubongoza umrhanelwa ukuba aphume kancinci, linokuthatha isigqibo sokuza kwaye lisenokuba libambe iselfowuni okanye into esandleni. Igosa lingakrokrela okanye into ingompu kwaye linokuphazamiseka ukuba lidubule. Le yimeko ezinokwenza uhlalutyo lwevidiyo lube nzima kakhulu. Kukwabonwa ukuba iikhamera azinakusoloko zithembekile kakhulu ngokukhanya, zinokuhamba zikhanyayo ziye kufiphele kwimizuzwana zisusa iinkcukacha zefom kugxininiso.
Eminye imikhawulo yile:
Ukhuthazo loqikelelo lwesibini xa indawo ethile ingabonakali kakuhle okanye ingaqondwa, kwiimeko ezininzi banokuthi babe kude kwimeko yokwenyani
Ikhamera enye inokungakwaneli ukufezekisa oko kufunekayo
Ikhamera inokurekhoda ubukhulu be-2
Ngamanye amaxesha umzimba wakho unokuthi uthintele ukubonwa okubalulekileyo
Ngaphandle kokushokoxwa, iikhamera zoMzimba waMapolisa zisaziwa ngoku gqibela ukuguqulwa: Oktobha 10th, 2019 by admin
2657 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-8 Namhlanje
Ukushokoxeka kwamakhamera okunxiba emzimbeni wePolisa
Iikhamera zoMbutho waMapolisa kunye neMfihlo
Izinto ze5 ukwazi malunga neeKhamera zoMzimba waMapolisa
Izibonelelo zekhamera enxibe umzimba wamakhamera
Inkampani yoKhuseleko -Iiziphumo zeKhamera zaMazi zaMapolisa zaMandla ziPolisa
Ukuqwalaselwa kobuso buza kwiiKhamera zaMandla oMapolisa